SEO Chinzvimbo Zvinhu
Muvhuro, April 3, 2017 Muvhuro, April 3, 2017 Douglas Karr
Tiri kushanda nemakambani akati wandei mukuvandudza kwavo kwekutsvaga kwekutsvaga izvozvi uye vari kushamisika chaizvo nekuwanda kwavo kwekutsvaga injini yekugadzirisa kuri kudhura ivo, kwete kuzviwana. Ivo vaive chaizvo vachibhadhara mafemu anga achikanganisa kwavo optimization.
Imwe kambani yakavaka purazi remadomaini ndokuzobuditsa mapeji mapfupi neese mazwi musanganiswa aripo, uye muchinjika-wakabatanidza nzvimbo dzese. Mhedzisiro yacho yaive nyonganiso yemizinda, nyonganiso yemhando, uye zvinotyisa mitsva yekutsvaga injini. Isu takatama tikadzorera matunhu ese kuita rimwe, tikazowaridza mapeji ane musoro wenyaya woga woga… uye mukati memazuva makumi mapfumbamwe hatisi pachinzvimbo chepamusoro pamusoro pezvavaive.
Kana wako SEO mubatsiri optimization inosanganisira chero basa kunze kwekukwezva nekuvandudza ruzivo rwemuenzi, iwe uri kunge uchizvipinza mumatambudziko. Douglas Karr, DK New Media
Iyi infographic kubva kuDot Com Infoway inoita basa rakanakisa rekukamura uye kuisa pamberi basa raunofanirwa kunge uchiita kana iwe uchitarisira kuwana kuoneka:
Kupindura Kwenhare - sezvo vashandisi veinjini yekutsvaga vachishandisa nharembozha, kuona kuti uri kugadzirisa mushandisi wekufambisa kwakakosha, kusanganisira kudzikisira peji rako renhare nekushandisa Google AMP.
Mhedzisiro Mhedzisiro - tanga tichigovana kwemakore izvo kuona kwekutsvaga kwemunharaunda kunobatsira pakuonekwa kwenyika asi zvichiri kushamisika kuti makambani mangani anofuratira uyu mukana wakanaka. Iva nechokwadi chekambani yako yakanyorwa zvakanaka pa Google yeBhizinesi uye shandisa zvinyorwa (NAP - Zita, Kero, Nhamba Yefoni) pane peji rega rega resaiti yako.
Hwemukati Zvemukati uye Zvinongedzo - apa ndipo panobudirira varapi vakuru uye vanotyisa vanokupinza mumatambudziko. Chinangwa chako chinofanirwa kunge chiri kuvaka zvakanakisa zvemukati (senge infographics) uye uchizviisa kunzvimbo dzakakodzera dzinovaratidza (senge tiri kuitira DCI). Iyi infographic ndeyekukosha kune vateereri vedu saka zvine musoro kuvapa chikwereti nekubatanidza kudzokera kune yavo saiti. Nekudaro, kungoisa ad-hoc Backlinks pane zvisina basa, mashoma emhando domains haasi kuzokuendesa iwe chero kupi.
Nzira dzekusimudzira - kuvaka mafomati mazhinji ezvemukati (odhiyo, vhidhiyo, infographics, maikisikopu, socialgraphics), uchirova makwikwi ako, uchibvumira zvisungo zvisingadiwe, kukurudzira kutaurwa kwezita, kupa mhinduro pamhepo, kugadzira bhezheni venhau, kugadzirisa kutsva kwezwi uye kuchengetedza yako saiti nhare yakagadzirira mazano ese makuru ekukurudzira zvemukati.
Heano infographic, Google SEO Chinzvimbo Chezvinhu uye Zvekusimudzira Matanho e2017:
Tags: AudiobacklinkingdciDK New Mediadot com infowaygoogle ampgoogle bhizinesi rangugoogle chinzvimbo zvinhugoogle + yebhizinesilocal searchyemunharaunda yekutsvaga chinzvimboyemunharaunda yekutsvaga kuonekaKushambadzira InfographicsKushambadzira Vhidhiyomicrographicszita rekero nhamba yefoniNAPmamiriro ezvinhuseonzira dzekusimudzira dze seoseo chinzvimbo zvinhumagariro
Mune SEO chinzvimbo uye traffic zvinhu zvakawanda. Vanhu vese vanoedza kukwidziridzwa uye kuwanda traffic. Zvekutora zvimwe zvemukati me traffic, kiyi, peji kurodha kumhanyisa zvese zvinosanganisirwa. Heano akanaka infographic kuongorora wega saiti ine akasiyana mazwi.
Zvita 10, 2011 na2: 29 PM
hehehe…. graphic yakanaka chaizvo, uye inonakidza kwazvo, yakajeka kwazvo…
Kuve iyo nhamba yekutanga iro harisi basa riri nyore, iwe unofanirwa kuve unogadzira chaizvo uye unofanirwa kuve unodisa kushanda nesimba chaizvo.
Ida iyo infographic! Ndatenda nechinyorwa ichi chinotyisa Douglas! Ini ndanga ndichinetseka, iwe unofunga Guest kutumira seyeti yekuvaka zano icharamba ichishanda gore rino?
Hongu… asi semuparidzi ndiri kunyanyo kuneta nehafu-yembongoro zvinyorwa apo vanhu vari kungoedza kufosvera chinongedzo mune yangu saiti. Ini handina dambudziko nec link kana iwo ruzivo rwunoshamisa uye rwekukosha kune vateereri vangu. Chero chimwe chinhu chingori kutuka, hazvo.
Ini ndinofanira kubvumirana newe 🙂 asi panogara paine anosara. Kana chinyorwa chacho chakanyorwa zvakanaka uye chichipa kukosha, chinongedzo hachizokuvadza.
Ppoor mhando zvinongedzo chaizvo anogona zvinokuvadza, hazvo!